Colaadihii Gobolka Hiiraan oo laga Heshiiyay – Radio Daljir
Colaadihii Gobolka Hiiraan oo laga Heshiiyay
Diseembar 19, 2015 3:57 b 0
Somalia, December 19, 2015-(Daljir)_ Wasiirka Amniga xukuumadda Soomaaliya, C/risaaq Cumar Maxamed iyo xubno kale oo ka tirsan labada gole ee dowladda ayaa goob-joog ka ahaa hishiis rasmi ah oo gelinkii danbe ee shalay ay ku gaareen Beledweyne waxgaradka beelihii dhawaan ku dagaallamay halkaas.
Munaasabaddan kooban oo lagu qabtay xarunta maamulka gobolka Hiiraan ayaa lagu soo bandhigay 6-qodob oo ay ku heshiiyeen labada beelood , iyadoo dhinacyadu ay soo dhaweeyeen heshiiska, isla markaana ay qaateen nabad.
Nabaddoon Maxamed Sheekh Aadan oo ka mid odayasha dhaqanka gobolka Hiiraan ayaa sheegay in duubabku ay mar walba u taagan yihiin xallinta khilaafaadka soo dhax gala bulshada, balse dowladda ay dhinaceeda ka gaabisay,wuxuuna intaa raaciyay inay rajo wanaagsan ay ka qabaan in la dhaqan-galiyo heshiiskan.
Dardaaran iyo hoga tusaalayn dheer oo loo jeediyay garabyadii ay dirirtu dhex martay ka dib ayaa goobta laga aqriyay qodobbadii ay ku heshiiyeen beelaha,isla markaan ay u kala saxiixeen wakiillo metelaya labada dhinac,waxayna u dhignaayeen sidan:-
Qodobbada lagu Heshiiyay ayaa waxay kala ahaayeen;
1:Dhaqan-gelinta iyo adkeynta xabad-joojintii ay kala saxiixdeen labada beelood 15-Dec-2015. iyadoo laga fogaanayo wax kasta oo keeni kara colaad dambe af iyo addinba.
2:In dhammaan goobihii dagaalladu ka dhaceen ay ahaadaan kuwa ka caagan wax dhaq-dhaqaaq ciidan ah, Mas’uuliyadda Ammaanka looga dambeeyo ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM.
3:Inay ballan-qaadayaan cuqaasha iyo mas’uuliyiinta labada beeloodba inay ilaalinayaan amniga iyo xasiloonida magaalada, wixii labada beelood dhexdooda ahna loo saarayo gudi soo baara kaddibna xal ka gaara,Guddigaasna waxaa xubno ka noqon doona Odoyaasha dhaqanka labada beelood iyo odoyaasha dhaqanka reer Hiiraan.
4:Wixii tabasho siyaasadeed ah ee ay qabaan Beelaha reer Hiiraan waa in loo maraa wada sharci ah. Dowlada Federaalka Soomaaliya waxay diyaar u tahay wax ka qabashada wixii tabasho maamul ah ee ay qabaan beelaha reer Hiiraan.
5:Cid kasta oo loo arko inay caqabad ku tahay dhaqan-gelinta heshiiskaan tallaabo sharci ah ayaa laga qaadi doonaa,Waxaa mas’uuliyada dhaqangelinta heshiiskaan mas’uul ka ah dowladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM oo is-kaashanaya.
6:Heshiiskaan wuxuu dhaqan-galayaa marka la saxiixo.
GOOB-JOOGE; Taliyaha ciidanka Jabuuti ee gobolka Hiraan Col;Osman Dubad Sugulle.
DAMAANAD-QAADE: Wasiirka Amniga Gudaha Somalia, Cabdirisaaq Cumar Maxamed.
AMISOM oo Dishay dad Rayid ah
Puntland:Xal Ma ahan 4.5